Zọ Europe 2021 ga-eme na Lodz, Poland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Zọ Europe 2021 ga-eme na Lodz, Poland
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na mkparịta ụka ndị nta akụkọ taa, a mara ọkwa na obodo nke atọ kachasị ukwuu na Poland, Lodz, ahọpụtara iji nọrọ na 16th European Route Development Forum na 2021.
Dika isi okwu maka ndi na-eme mkpebi ugbo elu nke Europe, Uzo Europe ga-enye ikpo okwu maka Lodz iji mata ma gosiputa ohere ahia di egwu nke Central Poland na-enye ndi isi na ndi na-eto eto kacha elu na Europe.
Steven Small, onye nduzi nke ihe omume, uteszọ kwuru "Anyị nwere nnukwu obi ụtọ na anyị na Lodz Airport na ndị mmekọ ha na-arụkọ ọrụ na-arụ ọrụ iji weta Europezọ Europe na obodo na 2021. Na ọdụ ụgbọ elu na-eme emume ncheta 95th nke afọ a, nhọrọ a na-abịa na-akpali akpali oge maka otu n'ime obodo ndị ikpeazụ Europe achọpụtabeghị. Site na akụrụngwa na ikike maka nde ndị njem abụọ kwa afọ, ọdụ ụgbọ elu na-enye ohere dị ukwuu maka obodo mmepe Europe. Ekwenyesiri m ike na Rozọ Europe ga-akpali uto dị ukwuu na njikọ ikuku ma na-enwu gbaa na Central Poland. ”
Anna Midera Ph.D., Onye isi oche nke Board na CEO nke ọdụ ụgbọ elu Lodz, kwuru "“zọ Europe bụ ihe omume nke otu ọkwa dị ka UEFA European Championship ma ọ bụ Ngosipụta EXPO. Obi dị m ụtọ na Lodz na ọdụ ụgbọ elu anyị ga-anabata mmemme dị oke egwu dị otu a. Anyị na-akpọ ụwa ụgbọelu niile ka anyị gaa Lodz iji gosi onye ọ bụla na Lodz bụ nnukwu obodo dị n'ime obi mpaghara siri ike - ebe ọ ga-aga eleta maka ọrụ na azụmaahịa yana ezumike obodo. Anyị kwenyesiri ike na ozugbo ndị ọbịa anyị hụrụ Lodz, ha ga-achọ ịmalite azụmahịa ha ebe a, mepụta ụzọ ma weta ndị njem nleta ọhụrụ na Lodz. Anyị ga-egosi Street Piotrkowska ama ama, ụlọ nrụpụta ụlọ nrụpụta na ụlọ nkwari akụ magburu onwe ya na isi nri. Zọ Europe 2021 ga-abụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ọdụ ụgbọ elu Lodz, nke nwere ike ijikwa ihe dị ka nde ndị njem 2 na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye ọ bụla.
Marcin Horała, onye osote Mịnịsta nke Akụrụngwa, Plenipotentiary nke gọọmentị maka Solidarity Transport Hub, kwuru na "N'afọ gara aga, ọdụ ụgbọ elu Polish na-ejikwa ihe dị ka nde ndị njem 49 nde na ihe dị iche iche nke mmepe ahịa ahụ dị okpukpu abụọ ka nke Western Europe. Poland na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ahịa ụgbọ elu Europe, nke gosipụtara site na nhọpụta maka ọkwá dị elu nke ndị ọkachamara Polish - Maazị Janusz Janiszewski Onye isi oche nke Polish Air Navigation Services Agency a họpụtara maka Onye isi oche nke A6 Steering Board na Mr. Piotr Samson Onye isi ala a họpụtara ndị isi ụgbọelu maka Onye isi oche nke European Union Safety Agency. Eziokwu ahụ bụ na a na-ahazi ụzọ Europe na Poland maka oge nke atọ gosipụtara ekele maka atụmatụ mmepe ụgbọ elu anyị gụnyere ndị metụtara ọrụ nke Solidarity Transport Hub. Mmejuputa atumatu oru a ga - eme ka mmekorita di n'etiti isi obodo na obodo nke ato kachasi na Poland, Lodz, nke bu otu n’ime ndi n’erite uru nke iru ulo oru ugbo njem ohuru na Poland na Central na Eastern Europe. N'ihi nke a, nhọpụta nke Lodz dị ka onye ọbịa nke mbipụta na-esote nke ụzọ gasị na-ekwupụta mmepe akụ na ụba kpụ ọkụ n'ọnụ maka mpaghara ahụ dum.
Piotr Samson, onye isi oche nke ndị ọrụ ụgbọelu na onye isi oche nke European Union Aviation Safety Agency kwukwara na “Poland bụ mba izizi weghaara nzukọ a na-aga n'ihu ugboro atọ. Ma ụgbọ elu Warsaw Chopin na ọdụ ụgbọ elu Krakow enwela oke mmetụta dị mma, n'ihi nnabata mmemme ahụ, anyị nwere ntụkwasị obi na Lodz ga-ahụ ọkwa ihe ịga nke ọma yiri nke a. Zọ Mbata Europe ga-etinye Lodz na etiti nke ụzọ mmepe obodo wee wepụta ọrụ ikuku ọhụrụ ma obodo ma Poland. ”
Janusz Janiszewski, Onye isi nke Polish Air Navigation Services Agency na Onye isi oche nke A6 Steering Board, kwuru na “Poland na-egosipụtakarị dị ka ihe atụ nke mmekọrịta mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara ụgbọelu. Anyị arụmọrụ, itinye ego na nkà na ụzụ ọhụrụ na imekọ ihe ọnụ iji melite iyiba ikuku na-ahụkarị ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị. Obi dị m ụtọ na Poland ga-akpọghachi onye ọbịa na mmemme kachasị mkpa maka obodo mmepe obodo Europe. Achọrọ m ikele Lodz, n'ihi na ihe ịga nke ọma ya pụtara na ọganiihu nke ngalaba ụgbọelu na Poland. ”
Tony Griffin, Onye isi oche ndị isi oche nke nyocha, ASM kwuru “Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọdụ ụgbọ elu Lodz ruo ihe karịrị afọ atọ, na-egosipụta mkpa maka ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ na obodo nke atọ kachasị ukwuu nke Poland na-eduga ụgbọ elu. Trafficgbọ njem ndị njem toro na ọdụ ụgbọ elu Lodz site na 11% n'afọ gara aga ma buru amụma na ọ ga-abawanye site na 14% na 2020. Enweelarịrị ọrụ ikuku ọhụrụ ise na netwọk ọdụ ụgbọ elu n'oge ọkọchị a: Rhodes, Heraklion, Corfu, Bodrum na Varna. Site na ndị na-eme mkpebi ụgbọ elu kachasị elu maka mmemme mmepe ọ bụla a raara nye mpaghara ahụ, ụzọ gasị Europe ga - abụ ihe mkpalite maka uto na ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu. ”
Zọ Europe 2021 ga-eme na 26-28 Eprel 2021 na Lodz, Poland na Expo-Lodz. Ihe omume a ga-akwado Lodz Airport, nke ndị mmekọ ya na-akwado ya Polish Air Navigation Services Agency na ndị ọrụ ụgbọ elu.